हामीले खाने अण्डा शाकाहार हो कि मांशाहार ? यस्तो छ वैज्ञानिक निष्कर्ष « News24 : Premium News Channel
हामीले खाने अण्डा शाकाहार हो कि मांशाहार ? यस्तो छ वैज्ञानिक निष्कर्ष
काठमाडाैँ । हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने अण्डाबारे समाजमा विभिन्न मत सुनिन्छन् । कतिपयले अण्डालाई शाकाहारी भोजन मान्छन् भने कतिले मांशाहार मान्छन् । माछामासु नखाने शाकाहारीहरुले समेत अण्डा खाने गरेको पनि पाइन्छ । तर अर्कोथरीले अण्डा मांशाहारभित्रै पर्ने गरेको तर्क राख्छन् ।
हालै वैज्ञानिकहरुले अण्डाको जीविकीय बनोट र यसबारेका धारणाहरुको अध्ययनबाट एउटा निष्कर्ष निकालेका छन् । जसअनुसार अण्डा शाकाहार र मांशाहार दुवै मान्न सकिने तर्क उनीहरुको रहेको छ । तर बजारमा पाइने अधिकांश अण्डा शाकाहारी नै मानिएकाे छ ।
हामीले बजारमा सजिलै किन्न पाइने अण्डा प्राय: बतासे अण्डा हुन् । जसबाट चल्ला/बच्चा बन्न पनि सक्दैनन् । यी अण्डाबाट जीवन बन्न नसक्ने हुनाले नै यी विज्ञानका दृष्टिमा शाकाहार देखिएका छन् । तर भालेपोथीबीच गर्भाधान भएर जुन अण्डा पारिन्छ र जसलाई कोरलेर चल्ला/बच्चा काढिन्छ ती अण्डा बरु मांशाहार बन्दछन् । किनभने तिनमा जीवनको अंश हुन्छ ।
वैज्ञानिकहरुको यस तथ्यलाई यसरी पनि बुझौँ, गाईभैँसीले दिने दूधलाई शाकाहार मान्न सकिएजस्तै बतासे अण्डाहरु पनि शाकाहार नै हुन् ।
हामीलाई थाहा छ कि अण्डामा तिनवटा तह हुन्छन् । जसमा पहिलो तह बाहिरी बोक्रा, जो कडा हुन्छ र जसलाई खान सकिँदैन । दोश्रो सेतो भाग जसमा धेरै मात्रामा प्रोटिन हुन्छ । अनि तेश्रो सबैभन्दा भित्रको पहेँलो भाग हुन्छ, जसमा प्रोटिनसँगै कोलेस्ट्रोल र फ्याटलगायत तत्वहरु हुन्छन् ।
अण्डाको सेतो भागमा प्राणीको कुनै हिस्सा नहुने भएकाले त्यसलाई पूर्णरुपमा शाकाहार मानिएको छ । तर गर्भाधान भई बच्चा बन्न सक्ने अवस्थामा बाहेर अन्यथा अण्डाको पहेँलो भाग पनि शाकाहार नै मानिएको छ । यसर्थ नकोरेलिने बतासे अण्डालाई वैज्ञानिकहरुले शाकाहारी भोजन मानेका छन् ।
सोमबार ओमिक्रोन संक्रमण देखिएको दुई जनाको मंगलबार रिपोर्ट नेगेटिभ !
काठमाडौं । सोमबार दक्षिणी अफ्रिकी मुलुकबाट नेपाल आएका एक विदेशी नागरिकसहित एक नेपाली नागरिकको पीसीआर
मुलुकभर थप ३१५ जनामा कोरोना पुष्टि, २ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा ३ सय १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले गर्यो ८ सयको सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण
भक्तपुर । भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले सोमबारसम्म ८०० जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको छ